पत्रपत्रिका Archives – healthykhabar.com
काठमाडौं,२ कात्तिक । अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमितलाई शैया दिन आनाकानी गर्दै खाली शैयासमेत लुकाउन थालेपछि गम्भीर अवस्थामा पुगेका पनि होम आइसोलेसनमै बस्न बाध्य भइरहेका छन् । निजी तथा सरकारी अस्पतालको अमानवीय व्यवहारका कारण गम्भीर बिरामी निकै सकसमा पर्न थालेका हुन् । अस्पतालमा शैया हुँदा हुँदै पनि अस्पतालले संक्रमितलाई भर्ना गर्न नमान्दा होम आइसोलेसनमा बस्ने गम्भीर संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको हो । गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितसमेत अस्पतालमा बेड नपाएपछि ज्यानै जोखिममा हालेर होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य भएका हुन् । अस्पतालले आईसीयू र भेन्टिलेटर भए पनि लुकाउँदा समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन । दीर्घरोगी घरमै, अस्पतालले दिँदैनन् बेड स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्दैन प्रभावकारी अनुगमन दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकहरू जोखिममा रहेका छन् । संक्रमण बढ्दै गएर दीर्घरोगीलाई जटिल समस्या हुँदा समेत अस्पतालले शøया दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । उच्च रक्तचापका बिरामीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले सावधानी अपनाउन आग्रह गरे ।…
काठमाडौँ,१३ असोज । अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण मुटुरोगको जोखिम बढेको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएको अहिलेको अवस्थामा मुुटुुरोगीका समस्या झनै थपिएका छन् । मानिस आफ्नो स्वास्थ्यलाई भन्दा खानपानले गर्दा मुटुरोगको सिकार हुने गरेका छन् । स्वस्थ व्यक्तिले पनि मीठो, मसालेदार, चिल्लो, स्वादिलो खाना निरन्तर रूपमा खाँदै जाँदा विस्तारै नसर्ने रोगको सिकार हुने गरेका छन् । नसर्ने रोगमध्ये प्रमुख रूपमा मुटुरोग पर्दै आएको छ । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मीले मानिसको आहार, व्यवहारले मुटुरोगको जोखिम बढाउने बताउनुभयो । चुरोट, खैनी, गुट्खा जस्ता पदार्थ नियमित सेवन गर्नाले मुटु रोगको सम्भावना बढाउने जानकारी दिँदै उहाँले यी वस्तुमा हुने निकोटिनले मुटुका धमनीलाई साँघुरो बनाउने र विस्तारै मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने बताउनुभयो । रक्तचाप बढ्नु खतरा अस्वस्थकर खानपान तथा चुरोट बिँडीजस्ता पदार्थ नियमित सेवन गर्नाले मुटुलाई बढी बल परेर रक्तचाप बढ्न जाने उहाँले बताउनुभयो । अत्यधिक खानपिन र शारीरिक निष्क्रियताबाट विश्वका एक अर्ब मानिस बोसोका कारण ‘ओभरवेट’ समस्यामा परेको अनुमान छ । सामान्यतया एक जना स्वस्थ मानिसको बडी मास इन्डेक्स (आईबीएम) १८.५ देखि…
काठमाडौंँ, १२असोज । विश्वव्यापी महामारीका रूप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण समाजमा मानसिक समस्या बढ्दै गएकाले सचेत रहन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन् । दैनिक बढ्दो गतिमा रहेको सङ्क्रमित तथा मृतकको सङ्ख्याले धेरैलाई मानसिक समस्या बढाएको विज्ञले औँल्याएका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. रवि शाक्य कोरोना सङ्क्रमण तथा त्यसको मृत्यु दरका कारण मानसिक रोगी बढेको बताउनुहुन्छ । उहाँले कोरोना लाग्ने डरका कारण पनि कतिपय आत्महत्या सम्मका घटना भएको बताउनुभयो । डा. शाक्य तनाव र चिन्ता भएपछि मानसिक समस्या आउनु स्वाभाविक हो, मानसिक रोगीमा झन् बढी समस्या आएको छ भने अन्य ठीक व्यक्तिमा पनि समस्या बढेको छ भन्नुहुन्छ । मानसिक रोगबाट सुधार भएका व्यक्तिले कोरोना लाग्ने डरले जाँडरक्सी खाने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले युवापुस्तामा मानसिक समस्या बढी छ । रोगजारी नपाउनुका साथै छरछिमेकीले गर्ने व्यवहारले धेरै समस्या भएको छ भन्नुभयो । कोरोना त्रासले जीवन असामान्य भएमा मनोविद्सँग परामर्श लिन सकिने र आवश्यक परे…
पिसिआर परीक्षणका लागि रातभरी भुइँमा सुताई
काठमाडौं,७ असोज । मंगलबार मध्यरात, झमझम पानी परिरहेको छ । पानीले भिजेको चिसो भुइँमा कागज, कार्टुन र रुमाललाई बिछ्यौना बनाएर निदाउने प्रयास गरिरहेका छन् । बेन्च र टेबलमा पनि निदाइरहेका छन्, निदाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यिनीहरू रोजगारी माग्न जम्मा भएका होइनन्, उपचारका लागि पनि आएका होइनन् । कोभिड परीक्षण गरिपाऊँ– उनीहरूको यत्ति माग हो । तर, दिनभर लाइन लाग्दा पनि पालो नआएपछि उनीहरू रातिदेखि नै यसरी लाइन लाग्न बाध्य भएका हुन् । के गर्नु रु यो देशमा महामारीविरुद्ध सरकारको बन्दोबस्त यस्तै छ । यो दृश्य हो राजधानीको टेकुस्थित कोभिड– डेडिकेटेड शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको । अस्पतालको गेटबाहिरको अवस्था पनि यस्तै छ । सडक किनारमा उभिएका, बसेका सबैसँग छाता छैन । छाता हुनेहरू छातामा ओत लागेका छन् । छाता नहुनेहरू बाटोछेउका घरका सिँढीमा ओत लाग्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उभिएर थाकेकाहरू भिजेको भुइँमै पल्टिएका छन् । महोत्तरी गौशालाका रामबाबु साह सोमबार साँझ काठमाडौं आइपुगे । सरासर लगनखेलस्थित आफ्नो कोठामा जान खोजेका साहलाई घरबेटीले गेटमै रोके । पिसिआर जाँच गरेको रिपोर्ट देखाएपछि मात्र घरभित्र…
कोरोना बीमा अब ‘कोरोना बीमा’ रहेन
काठमाडौँ, १ असोज। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को लक्षण र उपचारबारे विश्व नै अन्योल छ । नेपाल पनि त्यसबाट अलग छैन । कोरोनाको क्षति न्यूनीकरण गर्ने प्रयास पनि आआफ्नै ढङ्गबाट हुने गरेको छ । त्यसमा पनि नेपालले कोरोना बीमाको आफ्नै ढाँचा बनाएर काम गरेको छ तर कोरोना बीमा अहिले आफैँमा बीमाको खोजीमा पुगेजस्तो भएको छ ।सञ्चालनमा आएको पाँच महिना नपुग्दै कोरोना बीमा कोरोना बीमा रहेन । नाममा कोरोना बीमा छ तर त्यो बन्द भएर स्वास्थ्य बीमाका रूपमा परिणत भएको छ । बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ तथा कोरोना बीमालेखलाई संशोधन गर्दै कोरोना बीमा पोलिसीलाई स्वास्थ्य बीमाजस्तै बिलका आधारमा दाबी भुक्तानी गर्नेगरी संशोधन गर्दा त्यसको मौलिक रूप रहेन ।समितिले २०७७ साल वैशाख ५ गते जारी गरेको कोरोना बीमा पोलिसीमा पीसीआर पोजेटिभ पुष्टि भएको अवस्थामा १०० प्रतिशत दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था गरको थियो तर देशमा कोरोनाको महामारी अझ तीव्र बन्दा कोरोना बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै र भुक्तानीको दाबी पनि…
काठमाडौँ,२८ भदौ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) को उपचारका लागि आयुर्वेदिक गुणयुक्त जडीबुटीको प्रभावबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । उक्त अध्ययन आयुर्वेदिक क्याम्पसका प्राध्यापक तथा रिसर्च कन्सल्टेन्ट डा. विशुनदयालप्रसाद पटेलको नेतृत्वमा हुनेछ । डा. पटेलका अनुसार औपचारिक रूपमा एक सातापछि प्रदेश ५ मा एक सय जनामा विभिन्न जडीबुटीको मिश्रण गरेर बनाइएको औषधिको ‘क्लिनिकल ट्रायल’ गरिँदै छ । ‘उक्त अध्ययनका क्रममा ५० जना बिरामीलाई यो औषधि दिइनेछ र ५० जनालाई दिइने छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि के नतिजा प्राप्त हुन्छ हेरौं । विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि प्रयोगमा ल्याएर बिरामी निको भएको पाएका छौं । त्यसैले हामी प्रतिफल राम्रो आउँछ भन्नेमा सकारात्मक छौं ।’ उनका अनुसार कोभिड–१९ का विरुद्धमा प्रयोग भइरहेको नेपालमै पाइने जेठीमधु र त्रिकटु ९सुठो, पिप्ला र मरीच० मिश्रण गरी तयार पारिएको आयुर्वेदिक औषधिले परीक्षणका लागि अनुमति पाएको हो । जेठीमधु र त्रिकटु नै रोज्नुको कारण खुलाउँदै उनले भने, ‘यी औषधिहरू चीनमा पनि परम्परागत औषधिका…
विराटनगर, २८ भदौ । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वाड नं ३, भूल्केका पहिलो कोरोना सङ्क्रमित १९ वर्षीय इमरान अहमदको दैनिकी अहिले सामान्य भइसकेको छ । विगतमा जस्तै अहिले पनि उहाँ आफ्नो खेतबारीको काममा नियमित रुपमै सक्रिय हुनुहुन्छ । इमरानसँगै सङ्क्रमित हुनुभएका उहाँकै छिमेकी २१ वर्षीय वर्पेस आलमको मनबाट पनि विस्तारै पुरानो डर त्रास हराउँदै गएको छ । गाउँको जनजीवन सामान्य हुँदै गएसँगै विगतका डर त्रास पनि हराउँदै गएका हुन् । ‘सुरुमा कोरोना भाइरस लाग्यो भनेर थाहा पाउँदा त अहिले यस्तो अवस्थामा फर्किन पाइन्छ जस्तो लागेको थिएन’– सङ्क्रमण पछिको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै आलमले भन्नुभयो । कारोना भाइरसका पूर्व सङ्क्रमित इमरान र वर्पेसको मात्र होइन, नेपालमै पहिलोपटक समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको भुल्केको जनजीवन पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । वैशाखको पहिलो साता भुल्केको नुरी मस्जिदमा बस्दै आएका १२ जना जमातीसहित समुदायका दुई जनामा पहिलोपल्ट कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा सिङ्गो गाउँ नै अछूत जस्तो भएको थियो । तरकारी उत्पादनमा निर्भर उक्त गाउँमा उत्पादित तरकारी र दूधसमेत बजारमा बिक्री भएन ।…
काठमाडौँ,१४ भदौ  । कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले कोरोना भाइरस लागेका बिरामीको चाँडो स्वास्थ्य लाभमा उपयोगी हुुने औषधिको अनुुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसक्रममा अनुुसन्धान भइरहेको एक औषधिले बिरामीलाई लाभ भइरहेको छ । सो औषधिको प्रयोगले दुुई साताभन्दा कम समयमै सङ्क्रमित बिरामीले स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्कन थालेको चिकित्सकले दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका चिकित्सक तथा कोभिड–१९ का संयोजक डा. जितेन्द्र श्रेष्ठले आयुर्वेदिक उपचारबाट अरू रोग भएका कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई पनि धेरै फाइदा भएको जानकारी दिनुभयो । त्यसक्रममा उहाँले औषधि अनुुसन्धान गरिरहेको जानकारी पनि दिनुुभयो । पहिलेदेखि नै विभिन्न रोग भएका व्यक्तिलाई कोरोना सङ्क्रमण भएपछि डरको विषय हो तर आयुर्वेदिक पद्धतिले त्यस्ता व्यक्तिलाई निको पारेपछि चिकित्सक र बिरामीमा उत्साह देखिएको छ । त्यहाँ भर्ना भएका कोरोना सङ्क्रमितहरूमध्ये २१३ जना बिरामी निको भएर घर फर्किएका छन् । डा. श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘१९ महिनाको दूधेबालकका आमादेखि ७८ वर्षको ज्येष्ठ नागरिकसम्म यही औषधिले राम्रो गरेको छ ।’’ अस्पतालका अनुसन्धान अधिकृत डा. अमितमान जोशी भन्नुहुन्छ, आयुर्वेदिक औषधिमा विभिन्न…
काठमाडौँ,११ भदौ । काठमाडौँको मैतीदेवीमा एक व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भए । उनलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राख्न लगियो । भित्र रहेका अन्य व्यक्ति १५ दिनको होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहे तर व्यक्ति बसेको घर, कोठा र उसले प्रयोग गरेका सरसामान कसरी सङ्क्रमणमुक्त पार्ने भन्ने बारेमा अन्योल देखियो । जसका कारण छरछिमेकसमेत घर नजिक जान डराए । यो मात्र होइन अचेल मास्क लगायत सङ्क्रमित र सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिले प्रयोग गरेका सामग्री पनि घरायसी फोहोरमा मिसिएर त्यसै बाहिर जाने गरेका छन् । कतिपय स्थानमा ढल, नदी, सडक वा अस्पताल आसपास जथाभावी प्रयोग गरिएका मास्क फ्याँकिएका भेटिन्छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण बिरामीले प्रयोग गरेको मास्क, ओढ्ने ओछ्याउने र प्रयोग गर्ने अन्य वस्तुबाट सर्ने जोखिम उत्तिकै रहन्छ । सङ्क्रमणको जोखिमसँगै वातावरण पनि दूषित बनाइरहेको वातावरण विभागका वातावरणविद् भूपेन्द्र शर्माले बताउनुभयोध्र सङ्क्रमण दर काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक हुँदै गइरहेको छ । स्थानीय, प्रदेश, सङ्घीय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सङ्क्रमणको जोखिम बढे अनुसार आफ्ना…
राजधानीमा समुदायमै संक्रमण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकेन
काठमाडौं,११ भदौ । समुदायस्तरमा संक्रमण देखिएको काठमाडौं उपत्यकामा बुधबार कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या चार हजार नाघेको छ । तर, सरकारले संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकेको छैन । राजधानीमा बुधबार थपिएका तीन सय एक संक्रमितमध्ये काठमाडौंमा दुई सय ३०, ललितपुरमा ४७ र भक्तपुरमा २४ रहेका छन् । योसँगै काठमाडौंमा तीन हजार एक सय ८५, ललितपुरमा पाँच सय १० र भक्तपुरमा तीन सय २४ जना संक्रमित पुगेका छन् । अहिले सक्रिय संक्रमित रहेका देशका ७५ जिल्लामध्ये काठमाडौं सबैभन्दा बढी संक्रमित भएको जिल्ला हो । उपत्यकामा महिनौँदेखि घरबाहिर ननिस्केका सर्वसाधारणलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेले काठमाडौं उपत्यकामा समुदायस्तरमै संक्रमण देखिएको बताए । ‘उपत्यकामा अहिले संक्रमितमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी समुदायकै हुन्, जसको कुनै ट्राभल हिस्ट्री पनि छैन, कोही त महिनौँदेखि घरमै रहेकाहरू पनि छन्,’ डा. पाण्डे भन्छन् । तर, यसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले परिभाषित गरेकोजस्तो ‘लोकल ट्रान्समिसन’ भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘भारतमा समेत लोकल ट्रान्समिसन भएको भनिएको छैन, हाम्रोमा पनि…
काठमाडौं,९ भदौ । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ । हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या एक सय ५७ पुगेको छ । पछिल्लो समय लक्षणसहितका संक्रमित बढ्न थालेपछि अस्पतालका बेड भरिन थालेका छन् । आइसियु र भेन्टिलेटरजस्ता सघन उपचारका लागि आवश्यक बेडहरूको अभाव हुन थालेको छ । संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु र उचित स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुँदै जानुले जोखिमपूर्ण अवस्था निम्तिने भन्दै चिकित्सकहरूले संक्रमण न्यूनीकरण गर्न सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपालमै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री बनाएर अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सहयोग गर्दै आएका वैज्ञानिक महावीर पुन संक्रमण नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका मुख्य रहने बताउँछन् । सरकारको भर परेर बस्नुभन्दा आफ्नो ठाउँबाट सबैले पहल थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बिस्तारै टोलटोलमा संक्रमण देखिन थालेको छ, यस्तो परिस्थितिमा सरकारको भर परेर बस्नुभन्दा व्यक्ति स्वयंले सचेत हुन आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘घरघरमै बिरामी देखिँदासम्म भौतिक दूरीको नियम पालना नगर्ने, मास्क नलगाउने, समयसमयमा हात सफा नगर्ने,…
स्वास्थ्य तथा सवारी मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ
काठमाडौँ, ३० साउन । कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न सरकारले तोकेको स्वास्थ्य तथा सवारी मापदण्डको कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको छ । गृह मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्ति अनुसार मास्क प्रयोग नगरी हिँड्ने चार लाख १९ हजार ५३८ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । जसमध्ये तीन लाख ५४ हजार ८२४ जनालाई सम्झाइबुझाई छाडिएको, ३९ हजार ५०७ जनालाई मास्क वितरण गरिएको छ । त्यस्तै २५ हजार २०७ जनालाई जरिवाना गरिएको छ । विज्ञप्ति अनुसार बिनाअनुमति काठमाडाँैं उपत्यका प्रवेश गर्न खोज्ने सात हजार ६३५ वटा सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन् । यस्तै बिनाअनुमति उपत्यका प्रवेश गर्न खोज्ने १९ हजार ४८३ यात्रुलाई प्रवेश नाकाबाटै फिर्ता गरिएको छ । गृहले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण पालना गर्नसमेत सबैमा आग्रह गरेको छ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकालगायत दुई सयभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित रहेका जिल्लामा चल्ने यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको छ । मास्क लगाउने, भौतिक दूरी पालना गराउनेलगायत स्वास्थ्य मापदण्डको पालनालाई प्रभावकारी गराउन प्रहरी प्रशासनले निगरानी र कारबाही गरिरहेको छ । अनुगमन गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा नौवटा टोली परिचालन…
भरतपुर महानगर प्रमुखको आग्रह: कोरोनासंग लड्न सुरक्षा सतर्कता अपनाउँ
चितवन ,२६ साउन । भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहालले महानगरभित्र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएकोले सुरक्षा सतर्कता अपनाउन नगरवासीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। महानगर प्रमुख दाहालले सोमबार एक अपिल जारी गर्दै महानगर क्षेत्रमा पनि कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेकाले डराएर नभई उच्च मनोबलका साथ सुरक्षा सजगता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। कोरोनाबाट जोगिन जीवनशैलीलाई बदल्नु जरुरी रहेको भन्दै उहाँले शङ्कास्पद बिरामी तथा समुदायस्तरमा पिसिआर परीक्षण गर्ने, बिरामीको उपचार र आइसोलेसन व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिइने जानकारी बताउनुभयो । महानगरका वडा नं १, १०, १५ लगायतका मुख्य शहरी क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ । बैंक, प्रहरीलगायत स्थानमा काम गर्ने पनि पछिल्लो दिन सङ्क्रमित भएका छन् । भरतपुर महानगरको अगुवाइमा कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल स्थापना गरिएको थियो । सो अस्पताल पछि भरतपुर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ । महानगर प्रमुख दाहालले भरतपुर अस्पतालसहित महानगर क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य सङ्घसंस्थासँग समन्वय गरी कोरोना नियन्त्रणमा जुट्न अनुरोध गर्नुभयो।
डेङ्गु परीक्षण गराउनेको भीड, घरको सरसफाइ नगरेसम्म नियन्त्रण नहुने , स्वास्थ्य चेतना आवश्यक
काठमाडौँ, ३० भदौ । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा बिहीबार डेङ्गु परीक्षण गर्ने बिरामीको लाइन निक्कै लामो थियो । अस्पतालबाट इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको कार्यालयसम्मै लाइनले नपुगेर अस्पताल परिसरमा बिरामीको बाक्लै भीड पनि थियोे । टिकट काट्ने लाम त्यत्तिकै लामो थियो भने ज्वरो आएका बिरामी सकिनसकी भीडमा चिकित्सकको पालो कुरिरहेका थिए । ज्वरो युनिटको बहिरङ्ग (ओपीडी)मा मात्र सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनःलगायत अन्य चार जना चिकित्सक बिरामी जाँच्न व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । ललितपुरको पुल्चोकबाट डेङ्गु भएको आशङ्कामा उपचार गराउन आउनुभएका विनोद मानन्धरले आफूलाई ज्वरो आएर ठीक नभएको, शरीर गल्ने, पिँडुला दुख्नेजस्ता समस्या भएपछि अस्पताल आएको बताउनुभयो । काठमाडौँ ताहाचलकी आशिष्मा शर्माले पनि ज्वरो आएपछि डरले जँचाउन अस्पताल आएको बताउनुभयो । त्यस्तै राजधानीकै बानेश्वरबाट आएका सञ्जय घिमिरे पनि डेङ्गुसँंग मिल्दो लक्षण भएपछि थप परीक्षणका लागि अस्पताल आउनुभएको हो । मानन्धर, शर्मा र घिमिरेजस्ता सयौँ व्यक्ति डेङ्गु उपचारका लागि अस्पताल आएर चिकित्सकको प्रतीक्षामा थिए । जाडो मौसममा सरुवा रोग…
निजी मेडिकल कलेजलाई फाइदा हुने गरि प्रवेश परिक्षाबिना विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने
काठमाडौँ,१२ भदौ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति तीर्थ खनियाँले अवकाशको केही दिनअघि निजी मेडिकल कलेजहरूलाई फाइदा हुनेगरी विवादास्पद निर्णय गरेको भेटिएको छ । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको प्रस्तावमा उनले त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्को निर्णय भन्दै नेपालमा प्रवेश परीक्षा नै नलिई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने बाटो खोलेका हुन् ।निर्णयबारे बैठकमा सहभागीहरूले फरक/फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् । निवर्तमान उपकुलपति खनियाँ लगायतले बैठकबाटै निर्णय भएको बताए । हाल निमित्त उपकुलपति रहेकी रेक्टर सुधा त्रिपाठीले निर्णयबारे आफूलाई थाहा नभएको र कार्यालयमा बुझ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिइन् । यो निर्णय कार्यान्वयन भए मेडिकल कलेजहरूले हालकै अवस्थामा एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा ६० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त आर्जन गर्छन् । त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्ले भदौ ५ गते चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) एवं विभिन्न सातवटा मेडिकल कलेजहरूमा ‘निट’ लागू गर्ने भनी परिपत्र गरेको छ । भारतमा मेडिकल कलेज अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले ‘नेसनल मेडिकल इन्ट्रान्स टेस्ट (निट) उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । आईओएमले निट उत्तीर्ण गरेको आधारमा मात्रै विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नसकिने भन्दै आफूले सञ्चालन प्रवेश परीक्षा समेत उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था लागू…
उपत्यकामा डेङ्गुको खतरा, काठमाडौंमै ६० जना संक्रमित
काठमाडौँ, ८ भदौ । तराईका जिल्लामात्र होइन काठमाडौँ उपत्यकामासमेत डेङ्गु सङ्क्रमण प्रकोपको रूपमा देखा पर्ने खतरा बढेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले उपत्यकामा मात्र ५९ जना व्यक्तिमा डेङ्गु सङ्क्रमित बिरामी भेटिएको पुष्टि गरेपछि थप खतरा बढेको हो । महाशाखाका प्रमुख डा. विवेककुमार लालले विगतमा पनि काठमाडौँमा डेङ्गु सङ्क्रमित बिरामी भेटिएको तर यो वर्ष सङ्ख्या निक्कै बढेको बताउनुभयो । महाशाखा प्रमुख लालले सरकारी र निजी गरी विभिन्न १० वटा अस्पतालमा डेङ्गु सङ्क्रमित बिरामी रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रोग नियन्त्रण महाशाखामा मात्र ५९ जना सङ्क्रमित बिरामी रहेका छन् । महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत उत्तम प्याकुरेलले बानेश्वर, ताहचल, बालाजु, त्रिपुरेश्वर, टेकूलगायतका क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिलाई डेङ्गुको सङ्क्रमण भएको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म पूर्वी नेपालमा फैलिएको डेङ्गु अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । सङ्क्रमितको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने भन्दै उहाँले काठमाडौँ उपत्यका पनि डेङ्गुको उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो । महाशाखा प्रमुख डा. लालका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका तथा अन्य स्थानमा डेङ्गु सार्ने…